Salaamanews » 2013 » February » 22
Home » Turkish Ministers to visit Somalia
(Salaamanews)- Turkish Deputy Prime Minister Bekir Bozdag and Development Minister Cevdet Yilmaz will pay visits to Somalia and Sudan between February 22 and 24.
Within the scope of Somalia visit, Bozdag and Yilmaz will meet president and prime minister in Mogadishu as well as attend ground-breaking ceremonies of a mosque, school and orphanage.
On the second day of their visit, ministers Bozdag and... Tags: news Madaxda ugu sarreysa Turkiga oo ku soo wajahan Muqdisho
(Salaamanews)-Raisal wasaare ku xigeenka dalka Turkiga Bekir Bozdag iyo wasiirka horumarinta Cevdet Yilmaz ayaa lagu wadaa in ay booqasho ku yimaadaan dalka Soomaaliya.
Ra’isal wasaaraha iyo wasiir ku xigeenka horumarinta dalka Turkiga ayaa waxaa ay sidoo kale booqan doonaan dalka Suudaan.
Madaxdan ka socota dalka Turkiga ee Bozdag iyo Yilmaz ayaa la kulmi doona madaxweynaha iyo Ra’isal wasaaraha... Tags: warar Djibouti: Dadweynaha oo goobaha codbixinta u dareeray
(Salaamanews)-Shacabka dalka Djibouti ayaa saaka u dareeray goobaha cod-bixinta, si ay u doortaan xildhibaannada ka mid noqonaya baarlamaanka dalkaasi.
Dad gaaraya 200 oo kun ayaa sharci u leh inay ka codeeyaan 480 oo ah xarumaha lagu codeeyo oo dalka oo dhan laga sameeyay, sida uu VOA-da u sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Djibouti, Cabdi Ismaaciil Xirsi.
Kormeerayaal caalami ah oo... Tags: warar Kismaayo: Xaaladda oo kacsan iyadoo maamul u sameyn loo diyaar garoobay
(Salaamanews)-Ciidamada dowlada Federaal-ka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa howlgallo ay saaka ka sameeyeen magaalada Kismaayo waxay ku qabqabteen 50 qof oo lala xariirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-Shabaab iyo hub noocyo kala duwan leh.
Cidamada ayaa howlgalka ka sameeyay xaafadaha magaalada ayay guri-guri u baarayeen, sida uu SN u xaqiijiyay taliyaha amniga ee ciidamada dowladda Soomaaliya... Tags: warar Qaramada midoobay oo ballaarineyso shaqada ay ka waddo Soomaaliya
(Salaamanews)-War qoraal ah oo maanta ka soo saaray xafiiska xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka ee Soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo OCHA, ayaa lagu sheegay in QM ay qorsheynayso ballaarinta hawlaha ay ka wadaan gudaha Soomaaliya.
Justin Brady oo ah madaxa xafiiska OCHA ee Soomaaliya, ayaa VOA u sheegey in hawlgaladooda gudaha dalka ay saamixi doonaan in dad badan gargaar... Tags: warar HRW “Dowladda Holland yaanay Soomaalida dib u celin”
(Salaamanews)-Hay’ada Human Rights Watch, ayaa doowlada Holland ugu baaqday ineeysan dadka Soomaalida ah ee magangalyo doonka ah Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ay kujirto magaalada Caasimada ah ee Muqdisho, tan iyo inta amniga si buuxdo loo soo celinayo.
Warsaxaafadeed ay soo saartay hay’ada ayay ku sheegtay in doowlada Holland ay qorsheeyneysay maalmihii lasoo dhaafay ee shalay oo Arbaco... Tags: warar Hiiraan: Kooxda al-Shabaab oo dhaqaatiir sii deysay
(Salaamanews)-Kooxda al-Shabaab ee ku sugan tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa shalay gelinkii dambe xurriyaddooda dib ugu celiyay laba dhaqtar oo ay xireen kaddib markii ay halkaasi u tageen inay adeegyo caafimaad u fidiyaan dadka deegaanka.
Dhakhaatiirta oo markii hore ka tagay magaalada Beledweyne ayay maleeshiyadu ku eedeysay inay la shaqeeyaan hay’adaha samafalka oo ay horay u mamnuucday,... Tags: caafimaadka, warar Botswana: ku dhawaad 30 Soomaali ah oo la xiray
(Salaamanews)-Kadib baaritaan muddo socday ayaa ciidamada ammaanka dalka Botswana waxay xireen 28 Soomaali ah oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin argagixisada.
Dadka la xiray ayaa lagu eedeynayaa inay lacago u aruurinayeen maleeshiyada al-Shabaab ee ka dagaallanta dalka Soomaaliya.
Saraakiisha ciidamada ammaanka dalkaasi ayaa raggan ku qabtay howlgallo ay ka sameeyeen Fransistown oo ah... Tags: warar Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »